Tilmaamaha Safarka Xalaasha ee Langkawi - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Langkawi, (Jawi: لانكاوي) oo si rasmi ah loogu yaqaanno Langkawi, Dahabka reer Kedah (Malay: Langkawi Permata Kedah) waa jasiirado ka kooban 99 jasiiradood (5 jasiiradood oo dheeri ah oo dheeri ah ayaa lagu soo bandhigay mowjad hoose) oo ku taal Badda Andaman, oo 30 km u jirta meel ka baxsan xeebta weyn ee waqooyi-galbeed Malaysia. Jasiiraddu waa qayb ka mid ah gobolka Kedah, oo ku dhow xadka Thailand. Sannadkii 2008, Sultan Abdul Halim oo reer Kedah ah ayaa oggolaaday in loo beddelo magaca Langkawi Permata Kedah iyada oo lala kaashanayo dabaaldeggiisa Jubilee Dahab. Ilaa hadda kan ugu weyn ee jasiiradaha waa magaca Pulau Langkawi oo ay ku nool yihiin qiyaastii 65,000, jasiiradda kale ee la deggan yahay waa Pulau Tuba. Langkawi sidoo kale waa degmo maamul oo leh magaalada Kuah oo ah caasimada iyo magaalada ugu weyn. Langkawi waa jasiirad bilaa cashuur ah.
Magaca "Langkawi" wuxuu leeyahay laba asal oo macquul ah. Marka hore, waxaa la rumeysan yahay inay xiriir la leedahay boqortooyada Langkasuka, lafteeda nooc ka mid ah Malay negari alang-kah suka ("Dhulka qof kasta oo uu jecel yahay"), oo udub dhexaad u ah maanta Kedah. Rikoodhka taariikhiga ahi wuu yaryahay, laakiin diiwaanka Shiinaha ee Liang Dynasty (c. 500 AD) wuxuu ula jeedaa boqortooyada "Langgasu" sidii lagu aasaasay qarnigii 1aad ee miilaadiga. Ta labaad, waxay noqon kartaa isku darka ereyada Malayga ee 'helang', oo macnaheedu yahay "gorgor" iyo 'kawi', oo macnaheedu yahay "midab casaan bunni ah" ama "xoog leh", Malaygii hore.
Langkawi aakhirkii wuxuu hoos yimid saamaynta Saldanada Kedah, laakiin Kedah waxaa qabsaday 1821 Siam iyo Langkawi oo ay weheliyaan. Heshiiskii Anglo-Siamese ee 1909 wuxuu ku wareejiyay awooddii Ingiriiska, oo haysay gobolka ilaa xorriyadda, marka laga reebo muddo kooban oo ah xukunkii Thai ee ku hoos jiray qabsashadii Jabbaan ee Malaya intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Saamaynta Thai ayaa wali ka muuqata dhaqanka iyo cuntada Langkawi.
Langkawi wuxuu ahaa gadaal hurdo hurdo ah ilaa 1987, markii jasiiradda la siiyay xaalad cashuur la'aan iyadoo ujeedadu tahay kobcinta dalxiiska iyo hagaajinta nolosha dadka jasiiradaha ah. Kordhinta soo socota waxay ahayd mid cajaa'ib leh oo hadda Langkawi waxay kuxirantahay inta badan hay'adaha socdaalka ee yurub oo dhan.
Sare u kacaan cajiibka ah waxaa sidoo kale sabab u ahaa xaqiiqda ah in inkaartii Mahsuri laga qaaday dhalashadii jiilkeedii 7aad.
Waxaa gabbaad u ah lafdhabarta buuraleyda ee Malaysia, Langkawi waxay ka baxsataa monsoon waqooyi-bari gebi ahaanba waxayna ku raaxeysataa cirka qoraxdu xilliga qaboobaha marka gobollada bariga ay daadadku ka dhacaan. Waxaa ku lifaaqan xeebo ciid ah oo dabiici ah, caleemo kaymo duurjoogta ah iyo buuraha qulqulaya - laakiin waxaa caqabad ku ah marin-u-helid la’aanta - jasiiradda waxaa mar lagu tilmaamay inay tahay “sirta ugu wanaagsan ee Malaysia”.
10,000 hektar oo ka mid ah Langkawi iyo 99 jasiiradood ayaa ay UNESCO sanadkii 2007 ku dhawaaqday geopark.
Qorrax ka soo baxa Langkawi
Madaarka Caalamiga ah ee Langkawi () wuxuu ku yaal Padang Matsirat, oo ku taal woqooyi-galbeed ee jasiiradda. In ka badan hal milyan oo rakaab ah ayaa sanadkii mariya.
Shirkadaha soosocda waxay adeeg u fidiyaan / ka yimaadaan Langkawi: Air Asia, Malaysia Airlines, Firefly, Silk Air iyo Rayani Air.
Duulimaadyo toos ah ayaa Langkawi looga heli karaa Penang, Singapore, Johor Bahru, Kuala Lumpur iyo Kota Bharu.
Doonta Langkawi waxay ka shaqeysaa doomaha hawo-dhaqameedka degdega ah ee ka socda magaalada Kuala Perlis (RM18, 75 min), Kuala Kedah (RM23, 105 min), Penang (RM60, 165 min) (doonta waa qabow qabow, marka keen dhar diiran), iyo Satun (RM30 ama THB300, 75 daqiiqo), (doonta Satun ee Langkawi: doontii ugu dambeysay waxay ka tagtaa Satun 16:00.
Axdi kulaylaha waxay ka hawlgashaa doonyaha laga raaco Kuah Jetty ilaa Koh Lipe laba jeer maalintii inta lagu jiro xilliga sare (Oktoobar-dabayaaqadda Abriil) saacadaha 09:30 iyo 14:30 ee Langkawi iyo 11:00 iyo 16:00 laga bilaabo Koh Lipe. Inta lagu jiro xilliga hooseeya, laga bilaabo dhammaadka Abriil illaa dhammaadka Maajo, shirkaddu waxay leedahay safarro subax oo keliya. Laga bilaabo dabayaaqada Maajo, doontu waxay joogsataa socodkeeda illaa Oktoobar. Qiimuhu waa RM118 hal dariiqo (RM100 haddii aad khadka ka dalbatid), oo ay ku jiraan wareejinta doonyaha dhaadheer iyo khidmadaha lacagta Thai. Hubinta waxay ku taal iridda hoose ee Maxkamadda Cuntada ee Jetty Point. Diiwaangelintu waxay xirmaysaa 30 daqiiqo kahor bixitaanka. Safarku wuxuu qaadanayaa 90 daqiiqo. Imaatinka Lipe wuxuu ku yaal Bundhaya Resort.
Dekedda Telaga waxay ka shaqeysaa doomaha dheereeya ee ka socda Ko Lipe, Thailand laba jeer maalintii inta lagu jiro xilliga sare, saacadaha 09:30 iyo 14:30 (RM128 1-way, RM248 Return, 75min). Doomahaan ayaa kusoo xirta dhamaadka koonfurta xeebta Pattaya. Boos waxaa lagu sameyn karaa internetka.
Ma jiro wax gaadiid dadweyne oo jasiira ah, sidaa darteed xulashooyinkaagu waa inaad adeegsato taksi ama aad kireysato gaari, mooto / mooto, ama baaskiil.
Taksi ka imanaya garoonka diyaaradaha kuna socda Pantai Cenang ayaa ku kacaya RM20 ama ka yar Grab. Waxaad ka iibsan kartaa kuubo miiska taksiga ee garoonka diyaaradaha. Laga soo bilaabo boosteejada doonta ilaa Pantai Cenang qiimaha waa RM24. Kuwa imanaya Kuah Jetty ee galaya Magaalada Kuah, qiimuhu waa RM8.
Baabuur ama mooto / mooto
Ijaarashada baabuur ama mooto / mooto ayaa aad loogu taliyaa gaadiid la'aanta awgeed. Tan waxaa lagu samayn karaa garoonka diyaaradaha, dhismaha dekedda, ama dukaamada ku yaal Pantai Cenang. Iska ilaali inaad kireysato touts, maxaa yeelay qaar badani waxay ku shaqeeyaan sharci darro bilaa fasax iyo badiyaa caymis la'aan. Xusuusnow in shilalka ay ku dhacaan dalxiisayaasha mootooyinka / mootooyinka maalin kasta, sidaa darteed ka taxaddar in kasta oo taraafikada aysan u qasanayn sida Penang iyo meelaha kale.
Kireynta sedan dhexdhexaad ah oo qaboojiye ah ayaa qiimahiisu yahay RM70-RM150 maalintii (iyadoo kuxiran qaabka, xaalada iyo dhererka joogitaankiisa) iyo mootada 150cc / mootada ayaa qiimaheedu yahay RM40-45 maalintii. Ka raqiisan laakiin sida caadiga ah aad loo isticmaalo iyo wixii ka sii weynba waa baaskiillada semi-automatic 115cc ee RM25 maalintii. Proton daalan oo la socda Pantai Cenang laga yaabee inuu kudhowaad RM60-90 / maalin.
Si joogto ah u hubi heerka shidaalkaaga maxaa yeelay xarumaha shidaalka ee shidaalka (saldhigyada gaaska) way kala fog yihiin midba midka kale. Si kastaba ha noqotee, wakaaladaha kireysigu dan kama lihi inta shidaalku ku jiro haanta marka gaariga la soo celiyo markaa ha ku bixin shidaal ka badan intaad ku bixin lahayd. Shidaalku wuxuu ku kacayaa qiyaastii RM1.90 litir waana inaad ku celisaa baaskiilada isla heerka buuxinta intii aad qaadatay. Kirada qaarkood ayaa hubiya heerka oo calaameeya markaad saxeexayso warqadda.
Kaalinta shidaalka markii ugu horeysay ayaa kugu wareeri doonta. Waxaad u baahan doontaa inaad qiyaasto inta shidaal ee aad u baahan tahay oo aad marka hore bixiso. Baabuurta saloon inta badan haddii ay madhan yihiin RM50 si loo buuxiyo mootooyinkuna waa ku dhowaad RM5. Mararka qaarkood waxaad buuxineysaa gaarigaaga / baaskiil mana aadan isticmaalin wixii aad ku bixisay inaadan ka walwalin waxaad ku dalban kartaa tan miiska.
Xusuusnow inaad si ammaan ah oo tartiib ah ugu kaxeyso jasiiradda iyo dhinaca bidix ee wadada. Waxaa jira dalxiisayaal, carruur iyo xayawaan sida digaagga, lo'da iyo xitaa lo'da oo goosha. Ka taxaddar inaadan dul marin masaska qurxoon ama kormeerayaasha. Lo’da iyo masasku waxay jecel yihiin inay habeenkii jiifaan wadada; madoobaadka ayaa iftiimaya kuleylka.
Shuruuc aad u baahan tahay inaad ogaato.
Waa inaad sidataa liisanka darawalnimada markasta.
Suumanka kuraasta waa qasab dhammaan baabuurta. Ganaaxyada waxaa la siiyaa laga bilaabo RM50 oo lagu daray haddii aan xirneyn.
Koofiyadaha waa qasab. Ganaaxyada waxay la mid yihiin kuwa kor ku xusan laakiin waxaa taas ka sii muhiimsan in isbitaalku aanu lahayn xarumo lagu daaweeyo dhaawacyada madaxa, sidaas darteed waa inaad ka bixisaa medivac Penang, oo qaadata 45 daqiiqo ama ka badan - haddii helikabtar la heli karo.
Shatiga darawalnimada caalamiga ah looma baahna laakiin liisamada waa inay lahaadaan qoraal ku qoran Ingiriis.
Jidgooyooyinku waa wax iska caadi ah Langkawi; waxay inta badan xiiseeyaan dadka deegaanka oo aan lahayn liisan / cashuur. Hubso inaad haysato walxaha kor ku xusan iyo suunkaaga suunka oo lagu dhejiyay, wax dhibaato ahna ma lahaan doontid.
Ku safro baaskiil magaalada Langkawi
Ma jiraan fursado badan oo lagu kireysto baaskiilada halkan. Haddii aad meel ka hesho, markaa filo inaad bixiso RM10-30 maalintii.
ku yaal Langkawi
Dalxiiska Berjaya Langkawi
Xeebta Dalxiis ee ugu Fiican Langkawi
Xeebta Favehotel Cenang
Afarta dhibcood ee Sheraton Langkawi Resort
Afar xilli oo dalxiis Langkawi
Hoteelka Bahagia Langkawi
Hoteelka Citin Langkawi
Dalxiiska Dalxiiska ee Langkawi
Dalxiis Lagokawi Lagoon
Hoteelka Langkawi Seaview
Dalxiiska Xeebta ee Meritus Pelangi & Spa Langkawi
Hal Hotel Helang Langkawi
Dalxiiska Jasiiradda Rebak
Dalxiisyada Dunida Langkawi (Hore waxaa loo yiqiin Awana Porto Malai Langkawi)
Dalxiis Xeebeedka Sheraton Langkawi
Geedka Macbadka ee Bon Ton Hotel Langkawi
The Andaman, oo ah Dalxiis Dalxiis oo Casri ah, Langkawi
Hotelka Danna Langkawi
Dalxiiska Frangipani Langkawi & Spa
Villas By Westin Langkawi Resort Iyo Spa Langkawi
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaasha ee Malaysia > Tilmaamaha Safarka ee Xalaasha ah ee Langkawi